MacBook Pro ihuenyo nwere ike imeghari ka onye ọrụ na-akpaghị aka | esi m na mac
Ihuenyo MacBook Pro nwere ike ime mgbanwe na onye ọrụ na-akpaghị aka
Manuel Alonso | | MacBook, ọtụtụ
Ọ bụrụ na ikike ikike Apple niile mezuru, karịa kọmpụta anyị ga-enwe mmasị na obere ọgụgụ isi anyị. M na-echeta n'oge na-adịbeghị anya anyị gwara gị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nan a ahụigodo nke na-agbanwe na-akpaghị aka na onye ọrụ. Ọ dabere naanị n'akuku zuru oke iji rụọ ọrụ na. Were ya na ihuenyo na-eme otu ihe ahụ. Ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya imepe MacBook wee hụ ka ihe ndị ahụ na-amalite ịkwagharị naanị iji mee ya iji nwee ike ime mgbanwe nke ọma na ụzọ ọrụ nke onye ọ bụla. Nke ahụ bụ ihe ọ tụrụ aro na patent ọhụrụ a.
Tupu ịmalite ikwu n'ụzọ doro anya ihe patent a bụ, anyị ga-echetarịrị nke ahụ kpọmkwem n'ihi na ọ bụ patent. Ọ bụ naanị echiche. Echiche nke dabere na nyocha nke ndị injinia Apple na nke a na-egosipụta na mpempe akwụkwọ mana nke ahụ nwere ike ọ gaghị ahụ dị ka eziokwu n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, hapụ ya ka ọ nọrọ dị ka echiche. Ezigbo echiche, ee, mana ọ nwere ike ọ gaghị eme ka onye ọ bụla kwenye n'otu aka ahụ.
Eleghị anya ị maraworị nke a, mana ị ga-echeta na Apple na-akpachara anya n'akụkụ akụkụ ihe ngosi MacBook Pro na-agbada na Storelọ Ahịa Apple ọ bụla. A na-edobe ha kpọmkwem n'akụkụ ziri ezi maka ndị na-azụ ahịa na-emeghe ha na-akpaghị aka karịa, si otú a malite ịmalite mmekọrịta na igwe. Na ha na-enwe mmasị na kọmputa na nke ahụ n'ikpeazụ mechaa zụta ya nke bụ ihe ị chọrọ n'ezie.
Apple chọrọ ka oke ahụ bụrụ eziokwu n'onwe ya. Ya bụ, ka ị nọ ọdụ n'ihu MacBook Pro gị, Ihuenyo nwere ike ịchọpụta mgbe ịnọ n'akụkụ ergonomic, yana mgbe ịnọghị. Mgbe ịnọghị, ị nwere ike ihu ihu ihuenyo ka ọ dabara gị nke ọma. "Enwere ike ịhazi usoro nhazi iji chọpụta ọnọdụ ebumnuche maka akụkụ ihuenyo", na-ekwu patent ngwa.
Dabere ma ọ dịkarịa ala na akụkụ, na ọnọdụ nke ihe dị na oyiyi ahụ ma nwee usoro ahụ na-eme ka usoro hinge na-emegharị ma na-emegharị akụkụ ihuenyo, n'akụkụ akụkụ nke isi, site na ọnọdụ mbụ ruo n'ọnọdụ. Laptọọpụ ahụ nwekwara ike ịgụnye usoro nzaghachi ọnọdụ ahaziri iji chọpụta ọnọdụ n'ezie nke akụkụ ihuenyo n'ihe metụtara akụkụ ala.
Echiche bụ na igwefoto, nke nwere ike jiri teknụzụ yiri ID ihu nwere ike etiti ihuenyo n'ihe metụtara ihu anyị. "Sistemụ nchọpụta anya nwere ike ịgụnye projector ahaziri iji mepụta ụkpụrụ nke ìhè na onye ọrụ na ihe mmetụta ahaziri iji chọpụta ma ọ dịkarịa ala akụkụ nke ụkpụrụ ọkụ nke onye ọrụ na-egosipụta."
Ọzọkwa, ihe osise niile dị na ngwa patent na-egosi The anya achọpụtara si a igwefoto n'ịnyịnya fọrọ nke nta ebe mara ọkwa.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na enwere ike ịhazigharị ihuenyo mgbe emepere n'ụzọ dị otú a. ọ na-esote na ikekwe ọ nwekwara ike ime ihe mgbe emechiri ya. Ọ bụ ezie na ngwa patent ahụ na-elekwasị anya n'otu esi achọpụta ọnọdụ ziri ezi maka ihuenyo ngosi mepere emepe, ọ na-ezokwa aka na "usoro ịmepe ngwaọrụ na-akpaghị aka." N'echiche ahụ, ịpị mkpuchi nke MacBook Pro mechiri emechi, ma ọ bụ ikekwe ịme usoro a kara aka nke nwere ike ịhazi onye ọrụ ga-eme ka ọ mepee n'onwe ya. Ọ dị ka akụkọ ifo sayensị, mana ọ ga-aba uru nke ukwuu, ọkachasị mgbe anyị nwetara oku na anyị ga-eji otu aka mepee laptọọpụ.
Ka anyị ghara ịtụba mgbịrịgba na-efe efe N'ihi na dị ka anyị kwuru ná mmalite nke isiokwu, nanị na ugbu a, ọ bụ ndidi na anyị ga-enwe ndidi ịhụ ma ọ ga-abụ eziokwu. Mana were were were nwa oge, bata na nzukọ ahụ, dobe MacBook Pro n'elu ozi ahụ, nyefee aka gị wee mepee ya n'onwe ya, gbanye ya, mara ihu anyị, bido ma mezie keyboard na ihuenyo ka ọ kacha mma. nhazi. ịtụnanya.
Ugbu a, achọghị m iche n'echiche ihe ọ nwere ike na-eri na teknụzụ niile etinyere na laptọọpụ na agaghị m enwe ike ikwu ihe ọ ga-atụ ma ọ bụ etu MacBook (Pro) ga-enwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » Ihuenyo MacBook Pro nwere ike ime mgbanwe na onye ọrụ na-akpaghị aka
Syncwire na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịhọrọ eriri na ngwa MFi enwetara ikike
TSMC na-eme atụmatụ ịmalite mmepụta nke ibe 3nm maka Q4 2022